कारोनाको जोखिम कायमै छ : स्वास्थ्य मन्त्रालय : RajdhaniDaily.com sharethis
काठमाडाै‌ । पछिल्लो समय दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट नेपालमा पनि आउन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गर्न नागरिकलाई आग्रह गरेको छ ।
नयाँ भेरियन्ट नेपालमा नदेखिएकाले आत्तिनु नपर्ने तर सावधानी भने पूर्ण रुपमा अपनाउनुपर्नेमा अधिकारीको जोड दिए । उनले भने, “हाल नेपालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङख्या मात्र कम भएको हो, जोखिम कम भएको छैन । स्वास्थ्य मापदण्ड सबैले अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ ।” नयाँ भेरियन्टको कोरोना जित्ने’bout थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
दलहरुको महाधिवेशनले ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलियो : डा.सुन्दरमणि दिक्षित सीमा नाकामा हेलचेक्र्याइँ
देउवालाई शेखरकाे प्रश्न : कुन मापदण्डअनुसार मनोनयन गर्नुभयो ?
विनोद चौधरीको पद खारेजीको माग गर्दै सहिदपुत्रले गरे निर्वाचन आयोगमा उजुरी
के तपाईं भोकै हुनुहुन्छ ? पिर नमान्नुस्,खाना घरमै आउछ